Asked by wellwell 9 iminyaka edlule
Asked by trmelton 8 iminyaka edlule
Answered by knorretje 8 iminyaka edlule
Asked by spolen88 8 iminyaka edlule
Answered by xr417 8 iminyaka edlule
I upgraded firefox from 7.5 to 8.0 and have not been able to run firefox without it crashes as it loads. I have not been able to get crash IDs as firefox does not run lo… (funda kabanzi)
Asked by weesoms2 8 iminyaka edlule
Asked by celocrf 8 iminyaka edlule
Answered by celocrf 8 iminyaka edlule
I just updated to Firefox 8, and have not been able to open it since. I have tried starting in Safe Mode as well, but it continues to crash. I have also disabled my firew… (funda kabanzi)
Asked by jpgareri 8 iminyaka edlule
Asked by cheffe 8 iminyaka edlule
When I open firefox regularly or in safe mode it crashes and brings up the crash report. On a few occasions it would stay open for a minute or so unless I try to load a p… (funda kabanzi)
Asked by Sblackwell06 8 iminyaka edlule
Asked by joeypizza54 8 iminyaka edlule
Answered by lindsaygii 8 iminyaka edlule
Just updated as recommended to firefox 8. Restarted, then while in the process of clicking boxes to enable or disable add-ons, firefox crashed. Now crashes as soon as I… (funda kabanzi)
Asked by brichardson 8 iminyaka edlule
Asked by thomaslea1 8 iminyaka edlule
Asked by Sazerac7 8 iminyaka edlule
Asked by davo42 8 iminyaka edlule
Answered by davo42 8 iminyaka edlule
Asked by Fuzzy 8 iminyaka edlule
Friday at 530 we were able to get on the internet using Firefox. By 9pm we were getting a "can't load page" message but were able to go to Internet Explorer and get on-li… (funda kabanzi)
Asked by mimi_eddy@msn.com 8 iminyaka edlule
There was a section, near the top of all the bookmark folders, which was entitled, Most Visited Websites, I think. This folder contained about 8 of my most common sites.… (funda kabanzi)
Asked by mdtrot 8 iminyaka edlule
On the Mozilla website, and the "Getting started" video the browser has a round look with a "Firefox" tab on the top. I've just installed it and it doesn't look like that… (funda kabanzi)
Asked by AnaRQ 8 iminyaka edlule
Asked by danseidner 8 iminyaka edlule
Asked by CochemDave 8 iminyaka edlule
Answered by hello11 8 iminyaka edlule